Medjugorje: Amatabeghi m na aru adighi m ike, ewerem ihe ndi m ji arutu aka puta n'okpuru aka m ma lee ukwu m anya | EKPERE NA OZI
EKPERE NA OZI
Medjugorje: Amabeghi na ogwugwo m, m jidere osisi m n'aka m wee lee ụkwụ m.
Paolo Tescione	Edere ya Julaị 26, 2020 Julaị 26, 2020
Na July 25, 1987, ekesara nwanyị nwanyị America aha ya bụ Rita Klaus ụlọ ọrụ parish dị na Medjugorje, ya na di ya na ụmụ ya. Ha si Evana City (Pennsylvania) bịa. Mụ nwanyị jupụtara ndụ, na-eme mkpọtụ ma na-elegharị anya, ọ chọsiri ike ịgwa Nna nke parish okwu. Mgbe ọ gara n’ihu n’akụkọ ya, ka ọ na-eju ndị nna na-ege ya ntị anya.
Ọzọ site na "Sveta batina" pag.5.
Na July 25, 1987, otu nwanyị onye America aha ya bụ Rita Klaus gosipụtara n'ụlọ ọrụ parj nke Medjugorje, ya na di ya na ụmụ ya. Ha si Evana City (Pennsylvania) bịa. Mụ nwanyị jupụtara ndụ, na-eme mkpọtụ ma na-ele anya dị mma, ọ gụsiri agụụ ike iso Nna nke Parish na-agbasa. Ọ gara n'ihu na n’akụkọ ya, ihe Nna hụrụ ya n'anya juru ya anya. Enye ama eti most mme ,kp] emi enye okosobode. Na mberede, n'amaghị ama, ndụ ya ghọrọ ihe ịtụnanya dịka uri, nwee obi ụtọ dịka oge opupu ihe ubi, bụrụ ọgaranya dịka ụbịa nke mkpụrụ ya. Rita mara ihe mere ya: o kwudosiri ike na a gwọọla ya n'ụzọ ọrụ ebube - site na ịrịọ nwanyị anyị nwanyị ajụjụ ọnụ - site na ọrịa na-enweghị ọgwụgwọ, otutu sclerosis. Ma, nke a bụ akụkọ ya:
“Ebum n’obi m ikpe okpukperechi, ya mere agara m ebe obibi ndị nọn. N'afọ 1960, aga m ekwe nkwa, mgbe akpịrị dara m ọrịa, bụ́ nke mechara jiri nke nta nke nta ghọọ sclerosis. O zuru ezu ihe mere eji wepụta ya n’ebe obibi ndị nọn. N'ihi ọrịa m, enweghị m ike ịchọta ọrụ ọ gwụla ma m kwagara ebe ọzọ, bụ ebe a na-amaghị m. Ahụrụ m di m n’ebe ahụ. Ma agwaghị m ya banyere ọrịa m, ekwetakwara m na ekwughị m banyere ya. Ọ bụ n’afọ 1968. Oge m dị ime bidoro, ihe ọjọ wee gaa n’ihu. Ndị dọkịta gwara m ka m kpughere di ya ọrịa m. Emere m ya, iwe ya wutere ya nke ukwuu nke na o chere echiche banyere ịgba alụkwaghịm. Ọ dabara nke ọma, ihe niile gbakọtara. Enwere m nkụda mmụọ na iwe megide onwe m na Chineke .. Aghọtaghị m ihe kpatara ihe ọjọọ a mere m.
Otu ụbọchị, m gara nzukọ ekpere, ebe ụkọchukwu kpere ekpere maka m. Enwere m obi ụtọ na ya na di m hụrụ ya. Anọgidere m na-arụ ọrụ dị ka onye nkuzi, n'agbanyeghị ọganihu nke ihe ọjọọ. Ha were m oche nkwagharị gaa ụlọ akwụkwọ na ịba ụba. Enweghị m ike ide ihe ọzọ. Adị m ka nwatakịrị, enweghị ike ọ bụla. Abalị ndị ahụ wutere m nke ukwuu. N'afọ 1985, ihe ọjọọ kara njọ nke na enweghịzi m ike ịnọ naanị m. Di m na-ebekarị ákwá nke ukwuu, nke wutere m nke ukwuu.
N'afọ 1986, na ndị na-agụ akwụkwọ ọgụgụ, agụrụ m akụkọ banyere ihe mere Medjugorje. N'otu abalị, agụrụ m akwụkwọ Laurentin na ngwa. Mgbe m gụchara, ana m eche ihe m ga - eme iji kwanyere nne anyi ugwu ugwu. Ekpegaara m ekpere oge niile, mana ọ bụghị maka mgbake m, na-atụle ya dị oke mmasị.
Na June 18, n'etiti abalị, anụrụ m olu na-asị m: "Gịnị mere ị naghị ekpe ekpere maka mgbake gị?" Amalitere m ozugbo ikpe ekpere dị ka nke a: “Ezigbo Madonna, Nwanyị Udo, ekwere m na ị pụtara n'ihu ụmụ nke Medjugorje. Biko rịọ nwa gị ka ọ gwọọ m. ” Enwere m ozugbo enwere ụdị ọgbara mmiri na-agafe ebe m na ahụ ọkụ ọzọ na ahụ m. M wee hie ụra. Mgbe m tetara, echeghị m echiche banyere obi m n'abalị ahụ. Di ya kwadebere m maka ụlọ akwụkwọ. N’ụlọ akwụkwọ, dịka ọ na-adịbu, na 10,30 enwere ezumike. N'ụzọ tụrụ m n'anya, achọpụtara m n'oge ahụ na m nwere ike ịga naanị m, na ụkwụ m, ihe m na-emebeghị kemgbe afọ 8. Amaghị m otu m sirila lọta. Achọrọ m igosi di m otu m nwere ike isi na-emegharị mkpịsị aka m. Egwuru m egwu, ma ọ dịghị onye nọ n'ụlọ ahụ. Enwere m nchegbu. Amaghị m na a gwọrọ m! Enweghị enyemaka ọ bụla, esiri m n'oche ndị ngwọrọ. M rịgoro na steepụ, jiri arịa ọgwụ niile m na-eyi. Egburu m ka m yipụ akpụkpọ ụkwụ m na ... n'otu oge ahụ, achọpụtara m na agbakechara ụkwụ m n'ụzọ zuru oke.
Amalitere m tiwe mkpu akwa: “Chineke m, daalụ! Daalụ, Madonna m hụrụ n'anya! ”. Amabeghị m na a gwọrọ m. Ejiri m aka m jide aka m wee lee ụkwụ m. Ha dị ka ndị ahụ gbasiri ike. Ya mere, m bidoro gbagoro na steepụ, na-eto ma na-enye Chineke otuto, akpọrọ m otu enyi. Mgbe m rutere, m na-amal elu n'ihi ọ joyụ dị ka nwatakịrị. O sonyekwaara m inye Chineke otuto Mgbe di m na ụmụ m lọtara, o juru ha anya. Mu onwem siri ha, Jisus na Meri gwọrom, Ndị dọkịta, mgbe ha nụrụ ozi ahụ, ekwetaghị na a gwọrọ m. Mgbe ha gachara, ha kwuru na ha enweghị ike ịkọwa ya. O metụrụ ha n’obi nke ukwuu. Onye agọziri agọzi ka aha Chineke! Ọ gakwaghị m n'ọnụ ma ọlị. + otuto diri Chineke na Nwanyi anyi. N’abalị taa aga m esoro ndị ọzọ kwesịrị ntụkwasị obi bịa Mass, ikele Chineke na Nwanyị nwanyị anyị ọzọ ”.
Site na oche ọlụsị, Rita tụgharịrị n'ịnyịnya, dịka a ga-asị na ọ laghachitere ntorobịa ya.
Nke gara aga Post Gara aga post:“Eluigwe bụ ezigbo eziokwu” na ndụ mmadụ mgbe ọ nwụsịrị mgbe nkụchi obi gasịrị
Next Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa banyere obere ihe gị n'ihu Chineke
maka ozi zipu ozi email na [email protected]